Archive du 20181124
Adihevitra teny amin’ny Carlton Tsy sahy niatrika ny MAP 2 ny IEM
Nisy omaly zoma 23 novambra ny fihaonana nokarakarain’ny Friedrich-Ebert-Stiftung ( FES) tao amin'ny Hotely Carlton Anosy.
Fanosoram-potaka sy politika avo lenta Lasibatra ny vondrona RLM Communication
Manoloana ny fisian’andian’olona manao fanamiana misy soratra RLM Communication izay nizara vola teny amin’ny fivoriam-bahoaka teny amin’ny Fitsarana Avo momba ny lalàmpanorenana omaly zoma 23 novambra maraina, dia namoaka fanambarana ny tompon’andraikitra ao anatin’ity vondron’orinasan-tserasera ity.
Fiarovana sisin-dranomasina Nampitomboina ny traikefan’ ireo Mpamonjy voina
Mpamonjy voina ao amin`ny SAR (Search and Rescue) 27 avy amin`ny firenena dimy toa an`i Madagasikara, Afrika Atsimo, Mozambika,
Fanamby goavan’ny CUA Hovitaina anio ny fanesorana ireo fako miavosa
Ho fitsinjovana ireo vahoaka madinika izay mipetraka eny amin’ireo faritra iva eto an-dRenivohitra dia tonga nanamafy ny asa fanadiovana ireo lakan-drano, izay tsentsin’ny fako sy fotaka,
Basket tompondakan’i Afrika eo amin’ny ekipa tompondaka Lavon’ny Inter Club Angola 84-46 ny Mb2All Malagasy
Tapitra hatreo ny fandraisan’ny ekipa Malagasy Mb 2All anjara amin’ny fifaninanana basikety vehivavy fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika eo amin’ireo ekipa tompondaka tontosaina any Maputo Mozambika.
Profesora Solonjatovo Rakotonirina « Tsy ampy fisokafana ny tanora malagasy »
Nankalaza ny faha-21 taona nisiany omaly tetsy amin’ny P.K 0 Soarano ny oniversite Kristianina HECCMA, tarihin’ny filohany ny Profesora Solonjatovo Rakotonirina.
Mpampiasa taksibe eny Ivato Hanao filaharambe anio…
Tofoka ireo taksibe ao amin’ny zotra D mampitohy an’i Vassacos sy Ivato ireo mpandeha eny an-toerana. Mbola mitohy hatrany mantsy ny fanariana mpandeha an-dalana hataon’izy ireo.
Fandraharahan’ny tanora Mila manana traikefa mafy
Notanterahina tetsy amin’ny Hotely Le Pavé Antaninarenina omaly zoma 23 novambra ny hetsika “ carréfour des Entreprises” andiany fahavalo.
Radio Fahazavana Nikarakara fifaninana tantara an’onjam-peo
Misy ny fifaninana mamorona tantara karakarain’ny Radio Fahazavana, onjam-peo ara-pilazantsara izay isan’ny anjara biriky hametrahana amin’ny tokony ho izy ny lentan’ny tantara an’onjam-peo.
IIT Teatra Hanamarika ny faha-70 taona nitsanganany
1948-2018, feno 70 taona no nijoroan’ny IIT « Institut International du Thêatre IIT » ka ny 22 ka hatramin’ny 27 Novambra 2018 izao no hanamarihana izany any Hainan any Chine.
Teratany Venezoelianina ilay vehivavy izay nosamborina tetsy Ivato rehefa nitondra « drogue » tao anaty entany.